Vaovao - Minitra vitsivitsy amin'ny fivoriana amin'ny fampiharana ny fampidirana ny rafi-pitantanana roa
Ny marainan'ny 27 Aogositra 2020, Jiangxi Rayone Wheel Technology Co., Ltd. dia nanao ny fivoriana fanombohana ny rafi-pitantanana indostrialy sy fampidirana fampahalalana ao amin'ny efitrano fihaonambe amin'ny rihana voalohany. Tale lefitra Liu Xiaoyu ary ny Lehiben'ny seksiona Xiong Ying ao amin'ny Birao misahana ny indostria sy ny informatika ao amin'ny County Yihuang, ny talen'ny Zhao Shaolin ao amin'ny Park Industrial; Ekipa He Jinping, Tale jeneralin'ny New Nanchang New Creative Management Consulting Co., Ltd., ary Wang Bin, filohan'ny Jiangxi Ruiyiyuncheng Technology Co., Ltd., ary ny lefitry ny talen'ny famokarana jeneraly Li Runmin, ny minisitry ny teknolojia Le Faxing ary ireo olona mifandraika amin'izany tompon'andraikitra amin'ny sampana samihafa nandray anjara tamin'ity kaonferansa fanatanterahana fenitra ity.
Voalohany, ny sampan-draharaha misahana ny fitantanan-draharaha dia nampahafantatra ny tantaran'ny fampandrosoana sy ny toetoetran'ny fampidirana ireo haitao roa. Hoy izy: Jiangxi Ruiyi Yuncheng Technology Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny volana septambra 2015. Orinasa miavaka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fivarotana kodiarana firavaka alimina avo lenta izy io. Orinasa teknolojia avo lenta. Ao amin'ny Yihuang Industrial Park, tanànan'i Fuzhou, izay mankafy ny lazan'ny "Hometown of Talents", dia mahatratra 300 hektara ny velarany ary misy kodiarana fiara hatramin'ny 2 tapitrisa isan-taona. Nanomboka ny famokarana tanteraka izy io ankehitriny ary afaka mahazo sanda famoahana 600 tapitrisa yuan isan-taona.
Rayone dia mifantoka amin'ny fanavaozana ny teknolojia sy ny talenta. Ankehitriny dia manana vondrona talenta ambony mamolavola, mamokatra ary mivarotra kodiarana firavaka aliminioma izy. Miaraka amin'ny tanjaky ny serivisy famokarana feno sy ny fahaiza-manao fanaraha-maso kalitao tsara tsy tapaka, nahavita ny firafitry ny tsena manerantany izahay, ary ny vokatra dia aondrana any Eropa, Amerika, Moyen Orient, Azia atsimo atsinanana ary faritra hafa. Namorona fifandraisana maharitra sy maharitra mifampiankina amin'ny mpanjifa izahay ao an-trano sy any ivelany. Fiderana an'ny mpanjifa.
Mikasika ny teknolojia famokarana, nampiditra tsikelikely i Rayone ny tsipika famokarana famokarana kodiarana alimina iraisam-pirenena, ny tsipika famokarana famolavolana, ary ny famokarana tsipika famokarana mba hamenoana ireo fepetra takian'ny mpanjifa samihafa. Ny orinasa dia mijery ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanavaozana, ary hanangana ekipa teknika matihanina hampahafantatra tsy tapaka ny teknolojia mandroso avy any Eropa, Amerika, Japon, Taiwan ary ireo firenena sy faritra hafa, hisarika ny tombony ho an'ny mpiara-miasa anatiny sy ivelany, ary hampiditra tsara foto-kevitra famolavolana olona sy asa-tanana kanto.
Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa ihany koa dia mifikitra amin'ny famokarana foto-kevitry ny "kalitao" aloha, ary manangona vola mitohy amin'ny fitaovana fanandramana kalitao avo lenta, toy ny X-RAY, mpandalina spectrum, milina fitiliana fiatraikany, milina fanandramana mitrandraka, fitiliana maharitra matevina milina, sns. Ny orinasa dia nandalo nifandimby ny fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001 ary ny fanamarinana ny rafitra indostrian'ny fiara-miasa ISO16949. Tamin'ny volana desambra 2018, dia nekena ho orinasa nasionaly teknolojia avo lenta izy io, ary tamin'ny volana desambra 2019, dia nekena ho toy ny "orinasa vaovao manam-pahaizana manokana sy manokana" nataon'ny departemantan'ny indostrian'ny Jiangxi misahana ny indostria sy ny teknolojia fampahalalam-baovao.
Manaraka, Andriamatoa He avy any Nanchang New Creative Management Consulting Co., Ltd. dia nanome ny sehatra lehibe telo amin'ny fampiroboroboana ny fampidirana ny indostrialy sy ny indostrialy, ny maha-zava-dehibe ny fampiharana ny fampidirana ny indostrialy sy ny indostrialy ary ny fizotran'ny asa lehibe ny fampiharana ny fampidirana ny indostria sy ny indostria. Ny mpitarika sy ny mpitantana ny orinasa dia nanome fampidirana amin'ny antsipiriany.
Taorian'izay, Le Faxing, Minisitry ny Teknolojia ao amin'ny Jiangxi Ruiyi Company, dia nanambara ny antontan-taratasin'ny Vondron'orinasa mitarika sy ny vondrona miasa ho fampidirana ny indostrialy sy ny indostria; Li Runmin, filoha lefitry ny Production Jiangxi Rayone Wheels Company, dia naneho ny fahavononany hampihatra ny fenitra amin'ny anaran'ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasa.
Nanao kabary lehibe ny talen'ny Liu ao amin'ny Birao misahana ny indostria sy ny haitao momba ny fampahalalam-baovao ao amin'ny faritany Yihuang. Hoy izy: Miaina revolisiona indostrialy mifantoka amin'ny fampandrosoana teknolojia vaovao sy fampidirana indostrialy izao tontolo izao. Manoloana ny fanamby goavana dia nampiroborobo ny fireneko ny fampidirana ny indostrian'ny indostrialy sy ny indostrialy, nifindra tamin'ny firenena mpamokatra lehibe ka hatrany amin'ny firenena mpanamboatra matanjaka. Miaraka amin'ny fampivoarana ny revolisiona momba ny haitao vaovao, ny fandrosoana haingana sy ny fihanaky ny taranaka vaovao amin'ny teknolojia fampahalalam-baovao sy serasera dia nahatonga ny fiovan'ny endrika famokarana sy ny fanjifana iray manontolo, namaky ny sakany sy ny fetran'ny indostria isan-karazany, indrindra ny famokarana nentim-paharazana, anisan'izany i Etazonia. Ny indostrian'ny indostria, ny paikadin'ny orinasa 4.0 an'ny Alemanina, ary ny firosoan'ny fireneko lalina amin'ny fampiroboroboana ny indostria roa dia miresaka momba ny fampahalalam-baovao sy ny fidiran'ny haitao fampahalalana ao anaty orinasa. Manantena aho fa ny Jiangxi Rayone Yuncheng Technology Co., Ltd. dia hampivelatra ny County Yihuang amin'ny alàlan'ny fampidirana lalina ireo indostria roa. Ny kodiarana Rayone dia lasa iraisam-pirenena ary nanjary kodiarana vita tany Chine.
Ny talen'ny Zhao ao amin'ny Yihuang County Industrial Park dia nilaza fa: Jiangxi Rayone Wheel Technology Co., Ltd. dia teo an-tampon'ny Yihuang County amin'ny lafiny teknolojia famokarana sy ny fahitana ny fampandrosoana; ny fampidirana azy roa dia ny Kongresy Nasionaly faha-16 an'ny Antoko ka hatramin'ny Kongresy Nasionaly faha-19 Raha niresaka momba ny fampidirana lalina ny indostrialy sy ny fampahalalam-baovao, ny rafi-pitantanana fampidirana ireo roa ireo dia karazana torolàlana mahazatra ho an'ny orinasa hampivelatra ny lalina. fampidirana ny indostria sy informatization. Araka ny fenitra, nalahatra ny fizotrany mba hahafahan'ny orinasa manatsara ny tanjany ary misoroka ny fahalemena amin'ny làlan'ny fampivoarana informatization; mampihena ny vidiny. Jiangxi Rayone Wheel Technology Co., Ltd. no orinasa voalohany ao amin'ny County Yihuang mampiditra ireo fenitra roa hampiharana ny fenitra. Ny drafitra fampandrosoana ny orinasa dia manaraka akaiky ny paikady fampandrosoana firenena. Antenaina fa hanao izay farany vitany i Nanchang Xinsichuang hanampy ny orinasa hamita ny fampiharana ny fenitra.